Ukuqhathaniswa kweemali zeDarikhi: imali yedijithali ezitsha ezithembekileyo zedijithali ngoku. Iimali zedijithali ezithembekileyo nezona zininzi. Iimali ezinkulu zezodijithali ezikhulayo ngokukhawuleza.
Iimali zedijithali ezingcono kakhulu zokutyala ngoku ngoku. Ukukhula kwemali yedijithali ngokuzinzileyo.
Iimali zedijithali ezithembekileyo zokuthenga ngoku. Imali yedijithali ekhuselekileyo ngokukhula okuzinzile.
Iimali zedijithali ezithembisayo kakhulu kulo nyaka. Iingxowa-mali zedijithali ezinenzuzo kakhulu ukutshala imali.
Iimali ezili-10 eziphezulu ngokukhawuleza zeemali zedijithali ezikhulayo ngexabiso eliphezulu kakhulu kwiveki ephelileyo.
Iimali ezili-10 eziphezulu kakhulu zeemali zedijithali namhlanje.
Iimali ezili-10 eziphezulu ezincinci zedijithali namhlanje.
Iimali eziphezulu ezili-10 ezinkulu zeemali zedijithali ngeentengo zemarike kwiidola zase-US.
Iimali zedijithali ezitsha namhlanje.
Ukulinganiswa kwe-Cryptocur lwemali yenye yezona zinto zidumileyo kunye neenkonzo zibalulekileyo ze-sptptoratesxe.com
Indawo yethu yewebhu ilandelela amaxabiso i-imali yedatha evela kuzo zonke iitransekshini zotshintshiselwano kwiimali zehlabathi kwilizwe elinxulumene nelinye kunye nemali kazwelonke. Silandelela imbali yeenguqu kumgangatho we-crypto kwaye siqulunqe ukulinganisa kwe-crypto kwi-intanethi.
Ukulinganiswa kwe-Imali yedatha, iinkonzo eziphambili zewebhusayithi:
Eyona nto ibalaseleyo ye-imali yedatha - inkonzo ekhetha eyona mali ibalaseleyo ngexesha elide. Ezi zikhula zii-imali yedatha ngozinzo oluphezulu okanye ubuncinci bokuzinza.
I-imali yedatha elindelekileyo yeyona nto ithembisa kakhulu kwi-imali yedatha kumaxesha akutshanje. Ukuthembisa i-imali yedatha yeyona mali inenzuzo kakhulu kutyalo-mali, oko kukuthi, uzinzo, ukukhula kwe-imali yedatha ngenzuzo ephezulu.
Eyona nto ibiza kakhulu yi-cryptocurrens yeyona nto ibalulekileyo kwi-imali yedatha enexabiso eliphezulu lotshintshiselwano lwehlabathi. Uluhlu lwee-imali yedatha ezixabisa kakhulu namhlanje. Yeyiphi eyona mali ibiza kakhulu ngoku? Jonga impendulo yalo mbuzo kwinkonzo yeyona mali ibiza kakhulu kwi-Intanethi.
Eyona nto ibalulekileyo yi-imali yedatha kukulinganisa kwe-crypto kwimicimbi yeengqekembe zemali. Okanye ngendlela elula-iingqekembe zemali ezingakumbi zakhutshwa yinkqubo yokuthengiswa kwemali ye-cryptocur lwemali, kwaye zarhwebeswa kwiitransekshini ze-crypto - leyo inkulu kakhulu. Eyona mali inkulu yee-cryptocurrenthi ngenyanga kwiindleko zazo zonke iingqekembe ezikhutshiweyo (izinto ezikhutshwayo) zotshintshiselwano.
Eyona nto ithembekileyo yeyona nto ibalulekileyo yi-crypto ephezulu, eyaphulukana nexabiso elincinci kunye nokuhla kokukhula kwakungalunganga ixesha elide. Eyona nto ithembekileyo okanye ikhuselekileyo ye-imali yedatha yi-imali yedatha ngokukhula okuzinzileyo kunye nokuzinza okuncinci.
Eyona nto ikhula ngokukhawuleza kwi-imali yedatha kukukalwa kwee-imali yedatha ezifumana ixabiso ngokukhawuleza ngexesha elifutshane. Ukukhula kwee-imali yedatha kunomdla kutyalo-mali olukhawulezileyo. Kwakhona, ukukhula kwemali okukhawulezayo kunokubizwa ngokuba yeyona cryptocurrensets inenzuzo kunye neyona mali inenzuzo enkulu, ii-imali yedatha ezikhula ngokuphezulu.
Eyona nto ibiza ixabiso eliphantsi yi-imali yedatha yeyona nto iphambili kwi-crypto ngeyona mali iphantsi, ngelixa irhweba ngotshintshiselwano. Imali engabizi kakhulu inokuba nomdla kutyalo mali lokuqala. Ingabonisa inzuzo ephezulu ngexesha elifutshane. Ngokukodwa ukuba yimali entsha kwaye urhwebo kuyo sele luqalisile. Uluhlu lwee-imali yedatha ezingabalulekanga namhlanje. Yeyiphi eyona mali ibiza imali encinci? -bukela kwi-Intanethi kwinkonzo yethu "yeyona nto ibiza ixabiso eliphantsi kakhulu".
I-crypto entsha yinkonzo ebonisa i-imali yedatha ngomhla wokudalwa. I-imali yedatha entsha ivela phantse yonke imihla. Ukuze ungaphoswa uyilo lwe-imali yedatha entsha, sebenzisa "inkonzo entsha ye-imali yedatha" ekwi-Intanethi.